Ndị na-emepụta egbe na-efesa akwụkwọ ntuziaka & ndị na-ebunye - ụlọ ọrụ ịgbasa egbe nke China
Akwụkwọ ntuziaka ịgbasa egbe nkịtị Single Pipe
Ịgba égbè ọfiọkde akpaka ime ka ibuga na ịgba mmiri mmiri mkpuchi na ọ na-adịghị mma nrụgide na-emepụta site na mberede mgbasawanye nke abịakọrọ ikuku na ịgba nozulu: ọ na-nkewa n'ime abụọ ụdị: abụọ-ọnọdụ onwe-mmiri kemeghi abụọ-pipe ịgba egbe. , na abụọ ọnọdụ onwe-mmiri adiustable composite-pipe ịgba egbe.
Ọnụọgụ atomization na mpaghara nke egbe ịgba mmiri abụọ nwere ike ịhazigharị, ebe ma gas na-ebupụta ihe atomization quantities nke egbe ịgbasa ọkpọkọ na-agbanwe agbanwe. A na-eji ọnọdụ ikuku gas mee ihe maka ịkwọ ụgbọ ala nke mkpuchi ahụ site na ịfụ na mwepụ nke ihe ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe, ebe a na-eji ihe nkwụsị nke mmiri mmiri mee ihe maka ịgbasa ihe mkpuchi mmiri.
Akwụkwọ ntuziaka Spray Gun Sand Blasting maka igwe oyi akwa akwa nrụgide anwụ nkedo
Ụdị ihe eji eme ihe na-eme onwe ya ka ájá na-agbapụta egbe bụ oke okpomọkụ yana nrụgide dị elu nke ihe na-eguzogide ihe mejupụtara.
Ejikọtara ọnụ, ike siri ike karịa HRC93, njupụta karịrị 2.50g/cm3, aluminom.
Jiri ọgwụgwọ aluminom alloy na-eguzogide eyi, ike ruo HB110, egbe dum.
Ndụ ọrụ karịrị 1000 awa; imewe nke oghere nrụgide na-adịghị mma dị mma.
Ike na ike.